Imaaraadka Carabta oo ku faanay Dekeddaha Jabuuti iyo Berbera, kana hadlay arinta….. | Faafan News
Imaaraadka Carabta oo ku faanay Dekeddaha Jabuuti iyo Berbera, kana hadlay arinta…..
Wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta, Dr. Anwar Bin Muxammed Qarqaash ayaa caddeeyey in Imaaraadka Carabta xiriiradiisa Geeska Afrika ay yihiin kuwo Xoogan oo uu maamuus iyo ixtiraam ku kasbaday.
Xiriirada uu wasiir Anwar Qarqaash sheegay in uu dalkiisu ku noqday jaal la xurmeeyo, ayaa waxaa ka mid ah maalgashiga ay Imaaraadka Carabtu ka samaysay dekedda Magaaladda Berbera.
Waxa uu wasiirku tilmaamay in la macaamilka gobalka Geeska Afrika ay tahay arrin khatarteeda iyo fursadaheedu isbarbar yaallaan, laakiin muhiimadda uu gobalkani u leeyahay dunida Carabtu ay qasab ka dhigayso in ay xidhiidh fiican iyo la macaamil togan la yeelato.
Waxa kale oo uu wasiirku si dadban u iftiimiyey kaalinta ay dawladdiisu ka qaadatay isu soo dhowaanshiyaha dalalka Ereteriya iyo Itoobiya oo muddo labaatan sano ah colaad dhiig badani ku daatay u dhexeysay.
Wasiirka Wuxuu uu ugu horreyn ka hadlayarrinta khatarta iyo fursadaha is-barbar yaalla uu ku sheegay ee gobalka Geeska Afrika.
“Dabcan, xidhiidh siyaasi ah oo lala yeesho Geeska Afrika waxaa ku ladhan khataro iyo fursado is barkan. Laakiin ku xidhnaanta gobalkani waxa ay lagama maarmaan u tahay amniga iyo horumarka dunideenna carabta”,